Wonke umuntu wesifazane amaphupho kanye qha kwenela ukubabulala wazonda umzimba izinwele. Kule ndaba bathi akuyona eyishumi yokuqala futhi Estheticians bese kunika izindlela ezintsha ukuze siyixazulule. Lokujabulela yangempela yayingewona kuvulwa Elos izinwele ukususwa, okuvumela ukuba akhohlwe ngenkinga engadingeki izinwele.
Kodwa liyini ngempela Elos izinwele ukususwa? Izimpendulo ngakho impikiswano kakhulu, ngakho ngaphambi umelele, kufanele ufunde kabanzi mayelana nobuchwepheshe uqobo. Ngakho Elos - kuba nje isifinyezo, okuyinto yaphelela simiswe ngalendlela lelandzelako: «Electro-Optical Synergy», okuyinto uhumusha njengoba "electro-optical Synergy". Ngamafuphi nje, lapho kubhidlizwa i-izinwele senzeka bedle izinhlobo ezimbili amandla, okwenza kube lula nje kuphela ukuyeka ukukhula izinwele, kodwa futhi ngokuyinhloko ukubhubhisa oyiyo. Ukuba yizinhlobonhlobo nekghono eliphezulu indlela zisikisela ukuthi ephumelela kunazo hair ukususwa - kungcono nakanjani lowo wenziwa le ndlela. Ngaphezu kwalokho, liphinde ephephile kakhulu uma kuqhathaniswa nezinye izindlela ukugcoba ukususwa ngokuphelele noma olungaphelele uboya obungathandeki.
Lokho abantu abakucabangayo, nitinikele ku yigxathu enjalo ku inqubo enjalo? Elos-epilation, ukubuyekezwa zazo zingatholakala ku izinkundla eziningi Inthanethi, has kokubili abazivikelayo oshisekayo, futhi abaphikisi categorical. Ngenxa yalesi sizathu, kwenza isithombe wangempela indlela umsebenzi kunzima kakhulu, kodwa noma kunjalo, kubalulekile ukuba ukwethula umbono amaqembu, abaphikisi. Ukuze uqale, kubalulekile ukucacisa ukuthi kukhona le nqubo eqolo, futhi isinika injabulo, hhayi bonke abanjalo.
Ngakho, abanye abantu abaqinisekayo ukuthi Elos izinwele ukususwa - kungcono nje hyped, kodwa hhayi indlela ephumelelayo esebenzelana izinwele engadingeki. Ngaphezu kwalokho, kuthatha 15 amaseshini, okuyiwona kufanele babeka tibalo eside, ngakho futhi umphumela kuba ngokuphelele ngeke uyajabula, ngoba izinwele usengenza indlela yabo, kungakhathaliseki ukuthi inqubo engakaze kwenziwa emzimbeni.
Ngokwesibonelo, iningi labantu libike ukuthi izinwele ezimnyama kuphela uyakwazi ukususa Elos epilation. Amazwana mayelana nokususwa ephumelelayo ezimhloshana namanje eziyivelakancane, nakho kuholela ukungabaza ngale ndlela kokukhipha izinwele engadingeki emzimbeni. Okuningi kuxhomeke ekutheni ukufunde eziphakathi nezwe, lapho inqubo eyenziwa njengoba beauticians, njengoba ngempela kanye nezinye izifundiswa isimo sengqondo esihluke ngokuphelele ukuba umsebenzi wabo, yingakho yi ngokuvamile ongaphakeme.
Nokho, kukhona abantu abenza lucky okuningi: ku ezithangamini ezehlukene Internet, bayakwazi touted nenqubo efana Elos-epilation. Izibuyekezo kulokhu kusikisela ukuthi ngisho noma hhayi ngokushesha, kodwa kancane kancane, kodwa lezi nokucwala amaklayenti ubuhle akwazi ukuqeda inkinga osekukade izinwele ngokweqile.
Ngatadisha Imininingwane systematized, ungakwazi iziphetho ezilandelayo: kuqala, kunemidanti ngokuphelele kobuhlungu, futhi okwesibili, akusiyo isikhathi, futhi, okwesithathu, akakubangeli ukusha kanye isikhumba ukucasuka. Naphezu kweqiniso lokuthi beautician incoma kokwenza 8-12 izinqubo, abaningi sebeqala uqaphela ukunyamalala izinwele emva esimisweni lesithathu, okuyinto, Yebo, kuqinisa ukuthembeka yaleli su.
Futhi namhlanje, nokucwala eziningi zinikeza inkokhelo nezimo uhlelo noma baneliswa nesenzo, ukuze ngale ndlela ungagcina kancane ku Elos-epilation. Le nqubo ilungele abesifazane abangakwazi ukubekezelela ubuhlungu: kulesi simo, ubuhlungu phakathi naleyo nqubo sakugcina, okungelinye inzuzo esibalulekile salokhu inqubo yezimonyo.
Epilation, ukubuyekezwa zazo ziyangqubuzana ngokwanele, ngokunembile, indlela yayo eqondile, kufanele kukhethwe ngamunye. Ngaphambi inqubo, kufanele uvakashele cosmetologist abazokutshela ukuthi kulesi simo kungcono ukwenza. Ngokuvamile, umphumela yezimonyo Elos inqubo izinwele ukususwa kusishiya sibambe ongezansi, nokuningi kanye namakhasimende ekhetha le ndlela.